कतै तपाइलाई एचआईभीरएड्स लागेको त छैन ? यस्ता हुन्छन लक्षण » Khulla Sanchar
कतै तपाइलाई एचआईभीरएड्स लागेको त छैन ? यस्ता हुन्छन लक्षण
एचआईभीरएड्स आज विश्वको लागि एक गम्भिर समस्या हो । कति विकासशील र अविकसित देशको लागि एचआईभी ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । अविकसित देश मात्र होइन विकसित देशमा पनि यो रोग धेरैको मृत्युको कारण भइसकेको छ ।
असुरक्षित यौन सम्पर्क, एचआईभी संक्रमित रगत, एचआईभी संक्रमित आमाले बच्चा जन्माउदा र प्रयोग गरिएका सुई ९इन्जेक्सन०बाट यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने गर्दछ ।
यस्ता छन् लक्षणहरुः
एचआईभी पीडित व्यक्तिमा मांसपेशी दुख्ने समस्या हुन्छ । यदि तपाईमा पनि लगातार मांसपेशी दुख्ने समस्या छ भने सावधान हुनुहोस्, कतै एचआईभी त लागेको छैन७लदकउसरु